Nkwalite Onyinye Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Na-ekpo ọkụ China Manufacturer
Nkọwa:Nkwalite Onyinye Aka Aka,Aka n'akpa aka na-ekpo ọkụ,Ugbo oku na-ekpo ọkụ ngwa ngwa
Home > Ngwaahịa > Ụlọ Ụlọ Ọrụ Ngwá Ọrụ > Ihe nkiri na-ekpo ọkụ maka ebe a na-ekpocha ụlọ > Nkwalite Onyinye Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Na-ekpo ọkụ
Ọ dị mma maka iji ọkụ na-ekpo ọkụ n'oge oyi. Ihe ngwa ngwa ngwa ngwa, enwere ike iwe iwe ọkụ n'ime nanị 15 sekọnd. Elu okpomọkụ na usoro okpomọkụ maka nhọrọ gị. Aka anyị dị ọkụ eburula UK, Europe, wdg. Enwekwala ihu ọma nke CE, Rohs, na-adaba. Ogo na-edozi n'ezie .
Nkà na ụzụ dị elu nke ọrụ kpo oku nke PTC. Kedu ihe bụ PTC?
Igwe ihe omimi nke oma (PTC) bu ihe omuma ohuru ohuru nke gbanwere ulo oru oku. Ọ na-ekpo ọkụ ngwa ngwa, ya na usoro kpo oku nke na-achịkwa onwe ya, okpomọkụ na-achakwa edo n'ofe dum. Ọ dịghị nchịkwa thermostat dị mkpa
Ụzọ ọhụrụ nke kpo oku a na-adịgide adịgide ma na-eji ike dị ala karịa nkà na ụzụ. Ihe anyị na-aga na-agafe na saa mbara igwe na teknụzụ PTC bụ ihe mmiri na-adịghị na ya ma na-eguzogide ọgwụ ndị na-eduga ná ndụ ogologo oge.
Ihe nkiri kpụ ọkụ n'ọnụ maka Ntọala Kpọtụrụ ugbu a
Nkwalite Onyinye Aka Aka Aka n'akpa aka na-ekpo ọkụ Ugbo oku na-ekpo ọkụ ngwa ngwa Onyinye Aka Na-enye Aka Onyinye Aka Na-agbapụta Aka Nkwanye Aka Aka Na-agbanye Aka Njikwa Mgbochi Egwu Ejiri Aka Eji Aka Aka Na-ekpocha Onyinye Onyinye Christmas na Ahịa